Chondrodite, inobva kuMyanmar / a rare gemstone / humite group / video
Chondrodite, kubva kuMyanmar
Chondrodite is nessisilicate mineral ine fomu (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2. Kunyangwe iine mineral isiri nyore, ndiyo inowanzotarisana nhengo yeboka rinoshandiswa remaminerari. Inoumbwa mumidziyo ye hydrothermal kubva munzvimbo inonzi metamorphosed dolomite. Inowanikwawo inobatanidza ne skarn uye serpentinite. Yakawanikwa muna 1817 paMat. Somma, chikamu cheVesuvius complex muItaly, uye yakatumidzwa kubva muchiGiriki kuti "granule", iyo ndiyo tsika yakajairika yeiri mineral.
Mg5 (SiO4) 2F2 ndiyo inopedzisira yomufambiro wekupa iyo inopiwa neInternational Mineralogical Association, molar mass 351.6 g. Iko kunowanzova neH inzvimbo dzeF, asi, uye Fe uye Ti vanogona kushandura Mg, saka chirevo chemu mineral chinowanzoitika chiri nani kunyorwa (Mg, Fe, Ti) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O ) 2.
Chondrodite ine magnetite, Tilly Foster wangu, Brewster, New York, USA
Chondrodite iri yero, machungwa, yakatsvuka kana yakasviba, kana isingawanzopfeki, asi kugovera kwemavara akasiyana-siyana kunowanzoonekwa, uye mapurogiramu emakondomu echondrodite, humite, clinohumite, forsterite uye monticellite ave ataurwa.
Chondrodite is biaxial (+), neyekudzidzira mazita akasiyana-siyana anorondedzerwa se n = = 1.592 - 1.643, nβ = 1.602 - 1.655, nγ = 1.619 - 1.675, birefringence = 0.025 - 0.037, uye 2V yakaenzana se64 ° kusvika 90 °, inotariswa: 76 ° ku 78 °. Refractive indices inowedzera kuwedzera kubva kune norbergite kune clinohumite muboka revanhu. Vanowedzerawo pamwe neFexNUMX + uye Ti2 + uye ne (OH) - kushandura F-. Kupararira: r> v.
Chondrodite inowanikwa zvikuru mune metamorphic contact zones pakati pe carbonate rocks uye acidic kana alkaline intrusions apo fluorine yakatangwa nemasetomatic process. Inoumbwa ne hydration ye-olivine, (Mg, Fe2 +) 2SiO4, uye yakasimba pamusoro pemhando dzakasiyana-siyana dzechando uye zvinetso zvinosanganisira avo varipo mune chikamu chemukati wepamusoro.